Ao Amin’ilay Tanàna Ahitàna Herisetra Be Indrindra Erantany, Ampiasain’ireo Mpanao Graffiti “Ny Fitaovany” Ho Amin’ny Tsara · Global Voices teny Malagasy
Ao Amin'ilay Tanàna Ahitàna Herisetra Be Indrindra Erantany, Ampiasain'ireo Mpanao Graffiti “Ny Fitaovany” Ho Amin'ny Tsara
Voadika ny 05 Jolay 2015 14:11 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Swahili, Español, বাংলা, русский, عربي, Română , Deutsch, 日本語, English
Rei Blinky, mpanakanto mpanao Graffiti, amperinasa tao San Pedro Sula, Honduras. Sary: Nathaniel Janowitz. Nahazoana alàlana tamin'ny PRI.
Lahatsoratra sy tatitra anaty onjam-peo ity, nataon'i Susannah Roberson ho an'ny The World ary nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ny 26 Jona 2015, naverina navoaka eto ho ampahany amn'ny fifanekena fifampizaràna votoaty.
Fefy tariby misy tsilony, arabe tsy misy mivezivezy, mpitandro filaminana milanja basy. Sahala amin'ny hoe toerana any anaty sarimihetsika noforonina ireny, saingy tsy sarimihetsika izy eto. Ity no San Pedro Sula, Honduras, ilay tanàna nambara ho ny ahitàna famonoan'olona be indrindra erantany tato anatin'ny efatra taona.
Tsy ela akory izay, niezaka mafy ny hanome sary tsara kokoa itarafana azy i San Pedro Sula : toeran'ny firoboroboan'ny seho ara-javakanto. Noho ny asan'ireo mpanakanto mpanao graffiti ny betsaka amin'izany, ireo izay manao sary an-drindrina maroloko sy marevaka mameno ny tanàna.
Rei Blinky, mpanakanto mpanao graffiti, no antsoin'ilay mpanao gazety, Nathaniel Janowitz, hoe “mpamaky lay” amin'ilay hetsika ara-javakanto mihanaka manerana ny tanàna. Blinky no mpanakanto voalohany nijabaka teny an'arabe izay azo ambara ho haolo tanteraka. Manana zavatra betsaka ifamatorany amin'ireo andiam-boto ao an'tanàna izay maha-tanàna haolo izay. “Tsy fantatrao velively hoe rahoviana no hisy fifampitifirana hipoaka tampoka eo amin'ireo samy andiany. Noho izany mety hoe nandeha teny an'arabe ianao ary dia niantefan'ny bala iray,” hoy i Janowitz.
Tsy ireny andiany ireny ihany no mifehy ny arabe, fa ireo toerana misy graffiti ihany koa. Novàn'i Blinky izany rehetra izany, niaraka tamin'ny fombany tsy manam-paharoa izay antsoin'i Janowitz hoe “pop-art indizena.” Sahisahy ny asa ataony, maroloko ary tsy iadian-kevitra. “Izy no iray amin'ìreo mpanakanto izay rehefa mandalo miserana amin'ny iray amin'ny sanganasany ianao, tonga dia fantatrao hoe an'i Rei Blinky io. Tsy mbola misy toa azy,” hoy i Janowitz.
Nanamboatra ny làlana ho an'ireo mpanakanto hafa mba hanjohizan'izy ireny azy i Blinky. “Nitombo be ny hetsika, ary tena misy ny fivelaran'ny tontolon'ny zavakanto ato an-tanàna,” hoy i Janowitz. Mpanakanto maro hafa no nanjary fantatra teny an'arabe: Baruc, izay manome voninahitra ireo vehivavy ao Honduras amin'ny alàlan'ny sary an-drindrina ataony, sy i Carlos Badia, izay manao izany amin'ny endrika media mifangaroharo.
“Toa sahala amin'ny hoe ireo olona ao San Pedro Sula, raha eken-dry zareo fa tena misy tokoa ilay olana momba ny andiam-boto ao an-tanàna, eken-dry zareo koa fa tsy afaka ny hiaina ny androm-piainany ao anatin'ny tahotra izy ireo. Ary tsy maintsy mivonona ny hivoaka eny an'arabe izy ireo ka haka izany indray amin'ny fomba milamina,” hoy i Janowitz. “Raha tsy manana fahavononana ry zareo na fitaovana ho entiny mivoaka eny miaraka amin'ny basy, dia hivoaka kosa miaraka amin'ny borosy fandokoana.”
Manantena ny hifamatotra amin'ireo tanora ao San Pedro Sula ireo mpanakanto mpanao graffiti, izay maro amin'ireo tanora ireo no misafidy ny handositra fa tsy hijanona ao amin'ilay tanàna mikorontana. “Amin'izao fotoana izao, ho an'ireo ankizy ao an-tanàna, dia toy ny hoe, na ianao miditra anaty andiany, na ianao mihazakazaka manavotra aina,” hoy i Janowitz. Blinky sy ireo mpanakanto namany dia mitolona hanome safidy hafa ho an'ireo tanora — hijanona, anaty fandriampahalemana. Ambaran'i Janowitz fa isan'ny tanjona fototry ny iray amin'ireo mpanakanto ny hiasa miaraka amin'ny ankizy, hitondra azy ireny ho eny an'arabe sy hampianatra azy ireo momba ny zavakanto.
Manomboka manaparitaka ny taokantony any ivelan'i Honduras i Blinky. Noho izy sy ireo mpanakanto namany, hoy i Janowitz, mety hisy zavatra miabo ho hita ao San Pedro Sula. Feno toky i Janowitz ny amin'ny hoe hahita fahombiazana i Blinky. Tena zava-miavaka ny asan'i Blinky, hoy izy, satria, “Afaka jerenao izany, na eny amin'ny rindrina, na ao amin'ny Louvre. Mpanakanto goavana tokoa lery.”